NUS DISAFFILIATION- RICHARD BROOKS - UNIVERSITY OF CAMBRIDGE - သတင်း
NUS Disaffiliation- Richard Brooks
မေလ 24 မှ ​​27 ကြားတွင်၊ Cambridge သည် NUS မှထွက်ခွာရန်ဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ အများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။ ဤသည်မှာ NUS Disaffiliation Referendum နောက်ကွယ်ရှိ ပြဿနာများအတွက် လမ်းညွှန်ချက်ဖြစ်သည်။
Richard Brooks က ငွေကြေးဆိုင်ရာ ငြင်းခုံမှုသည် တစ်ခုတည်းသော အငြင်းအခုံမဟုတ်သော်လည်း [ဆက်စပ်မှုကို လိုလားသော] တစ်ခုတည်းသော အကြောင်းပြချက်မဟုတ်သော်လည်း ၎င်းသည် အဓိကအချက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ယူဆပါသည်။ NUS မှ ထွက်ခွာခြင်းသည် ကျောင်းသား သမဂ္ဂများ အပေါ် သက်ရောက်မည့် သိသာထင်ရှားသော ငွေကြေးဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို သင် လျှော့တွက်၍ မရနိုင်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
အများစုအတွက်၊ NUS သည် Pizza Express တွင် 40% လျှော့စျေးဖြင့် ငွေကို အဓိက သက်သာစေသော်လည်း အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာ NUS ကတ်ရောင်းချရုံထက် ပိုမိုထိရောက်ကြောင်းနှင့် အခြားဝန်ဆောင်မှုများကြားတွင် NUS သည် Unions များ လျှော့စျေးဝယ်ယူနိုင်သည့် purchasing consortium ကို ပံ့ပိုးပေးသည်ဟု Brooks မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ အထောက်အပံ့များ
Pizza Express - တစ်ခုတည်းသော NUS အကျိုးကျေးဇူးမဟုတ်ပါ။
ခန့်မှန်းထားသည့် 2016-17 Budget အရ၊ ကွဲလွဲမှုသည် ၎င်းတို့၏ CUSU ပေးချေမှု ပေါင် 10,000 အပါအဝင် အသားတင်ကုန်ကျစရိတ် £3,500 ရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဝဘ်ဆိုဒ် .
CUSU ကောင်စီတွင်၊ သမ္မတ Priscilla Mensah သည် ဘဏ္ဍာရေးအကျပ်အတည်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများကို ကိုးကားမည့်အစား ငွေကြေးဆိုင်ရာ အရည်အချင်းမရှိမှု ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော စွပ်စွဲမှုများကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ ဘတ်ဂျက်ရှင်းလင်းမှုအရ CUSU တွင် ကျန်းမာသော [ဘဏ္ဍာရေး] အရန်ငွေ £341,000 ရှိသည်။
Jack May သည် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုကို မေးခွန်းထုတ်သည်။ သူပြောပြတယ်။ မြို ဂျူးကျောင်းသားများ၏တရားဝင်သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုများကြောင့်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာပြဿနာများကိုဦးစားပေးရန်၊ ကျယ်ပြန့်သောကျောင်းသားဦးရေသည်အလွန်အမင်းစိတ်မငြိမ်ဖြစ်နေလိမ့်မည်... ပိုမိုလက်တွေ့အဆင့်တွင်၊ UK တက္ကသိုလ်များစွာ၏မကွဲမလွဲဖြစ်မှုကိုပြင်းထန်စွာပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်အတင်းအကြပ်တွန်းအားပေးပါက NUS သည် လုံးဝဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ ဤအတောအတွင်း၊ ကျောင်းသားများသည် ကျောင်းသားဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ၎င်း၏ကြီးမားသောအရန်ငွေများကို အသုံးပြုကြောင်းသေချာစေရန် CUSU နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
Brooks သည် ငွေကြေးမတည်မငြိမ်ဖြစ်ခြင်း၏ ကုန်ကျစရိတ်များအကြောင်းလည်း ပြောခဲ့သည်။ အကယ်၍ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုသည် ကျိုးကြေပြီး ကွဲသွားပါက အမျိုးသားစုပေါင်းအသံများ ဆုံးရှုံးသွားသောကြောင့် ကျောင်းသားများ ဆုံးရှုံးရသည့် အဓိကလူများ ဖြစ်ကြသည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ဒါကို Jack May က မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းသားများသည် ၎င်းတို့ကိုယ်သူတို့ တက်ကြွသော စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအဖွဲ့များအဖြစ် စုစည်းသောအခါတွင် ကြီးမားသော ပါဝါများ အမြဲရှိကြသည်... NUS ကို အားကိုးရမည့် အထွတ်အထိပ်မပါဘဲ၊ ကျောင်းသားများသည် ၎င်းတို့၏ အခွင့်အရေးအတွက် ရပ်တည်ပြီး နိုင်ငံရေးနှင့် ပိုမိုပါဝင်ရန် မည်မျှအရေးကြီးကြောင်း ကျောင်းသားများက ပိုမိုသိရှိနားလည်လာမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့အတွက် အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတွေ - အဲဒါက အပြင်ထွက်ပြီး မဲပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆန္ဒထုတ်ဖော်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရွေးကောက်ခံရုံးမှာ ကိုယ်တိုင်ရပ်တည်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊
Cambridge ZeroCarbon - ကျောင်းသားများသည် ၎င်းတို့၏ အသံကို အသုံးပြုနေပြီဖြစ်သည်။
မြို ရှိခဲ့ပါတယ်။ CUSU ပုံစံ ဒီမိုကရေစီအတွက် ရှေ့တန်းထိုင်ခုံ CUSU ကောင်စီတွင်။ NUS ၏ကိုယ်စားပြုအမှတ်တံဆိပ်အကြောင်းမေးမြန်းသောအခါ Brooks ကကျွန်ုပ်တို့၏ [လက်ရှိ NUS] ဒီမိုကရေစီသည်အလုပ်လုပ်သည်ဟုမထင်ပါ။ အဲဒီကိုယ်စားလှယ်တွေ မဲပေးပုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တာဝန်ခံမှု အားနည်းတယ်။
ကိုယ်စားလှယ်များ၏မဲများကို လူသိရှင်ကြားမထုတ်ပြန်သည့် NUS ၏ ပိတ်ထားသောမဲပေးစနစ်သည် ကိုယ်စားလှယ်များအား ၎င်းတို့၏မဲများအတွက် တာ၀န်ယူခြင်းမှ တားဆီးခြင်းအတွက် ဝေဖန်ခံနေရသည်။ တစ်ဦးချင်း ကိုယ်စားလှယ်များသည် ကျောင်းသားများနှင့် ဆက်ဆံရေးကို ထိန်းသိမ်းထားရန်နှင့် ပြဿနာများနှင့် ပတ်သက်သည့် ၎င်းတို့၏ ရာထူးများကို လူသိရှင်ကြား ထုတ်ပြန်ရန် လိုအပ်သည်။
ဘယ်တော့လဲ မြို ၎င်းတို့၏မဲပေးမည့်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းရန် Cambridge NUS ကိုယ်စားလှယ်ငါးဦးထံ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာ CUSU ဥက္ကဌ Priscilla Mensah အပါအဝင် ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦး၏ရာထူးကို အတည်မပြုနိုင်ခဲ့ပါ။
သူမသည် နှစ်များအတွင်း CUSU သမ္မတများထက် ပိုမိုကြီးမားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
Brooks အတွက်၊ အားလုံးဟာ အတွင်းကနေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လိုအပ်ချက်ကို ပြန်ရောက်လာတယ်- နောက်နှစ် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ညီလာခံမှာ အဲဒါကို ပြင်မယ်။
အပြောင်းအလဲကို အတင်းအကြပ်လုပ်ရန် အဆင်မပြေခြင်း။
ကွဲလွဲနေခြင်းသည် မကျေနပ်မှုများကို ဖော်ပြရန်နှင့် အပြောင်းအလဲကို အားပေးရန် အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်ဟူသော အယူအဆကို Brooks က ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းထားသည်။ NUS ၏ နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်ကို မကျေနပ်ပါက၊ ၎င်းကို ပုံဖော်ရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်း၊ သင့်စိုးရိမ်မှုများကို ဖြေရှင်းရန်၊ ၎င်းနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းများကို အသုံးပြုရန် သင်သည် ၎င်းကို ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်သည်။
NUSceptic သည် Cambridge လှုပ်ရှားမှုနှင့် မသက်ဆိုင်သည့် မသမာမှုများအတွက် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘယ်တော့လဲ မြို အဖွဲ့၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ ၎င်းတို့သည် NUS အား ၎င်း၏မဲပေးစနစ်အား ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် အတင်းအကြပ်လုပ်ဆောင်လိုကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် တိုးတက်မှု-လက်ဝဲပဲ့တင်သံအခန်းမဟုတ်တော့ဘဲ အမှန်တကယ်ကိုယ်စားပြုဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ၎င်း၏ပလပ်ဖောင်းမရှိသောမူဝါဒနှင့် အာရုံစိုက်မှုများကို လျှော့ချလိုကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်။
ကျောင်းသားတွေ အပြင်ထွက်ရင် ပိုကောင်းမလား?
NUS အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးစီကို သမ္မတအတွက် မဲပေးခွင့်ရစေမည့် One Member One Vote option နှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းသောအခါ Brooks က NUS ကို [OMOV] သို့ ပြောင်းလဲလိုပါက လာမည့်နှစ် ညီလာခံသို့ မဲပေးရန် လိုအပ်သည်ဟု အခိုင်အမာ ပြောကြားခဲ့သည်။ အပြောင်းအလဲအတွက်။ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသောအခါတွင် သူသည် NUS ၏ဒီမိုကရေစီစနစ်အား ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း၏စင်မြင့်ပေါ်တွင်ရပ်နေပြီး လာမည့်နှစ် NUS ညီလာခံတွင် ပြင်းထန်စွာကွဲပြားခြားနားသောဒီမိုကရေစီပုံစံသစ်တစ်ခုယူဆောင်လာရန်မျှော်လင့်ထားသည်။ Brooks သည် One Member One Vote သည် ၎င်း၏ထင်မြင်ယူဆချက်အရ ရှေ့သို့သွားသောလမ်းဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းခဲ့သည်။
CUSU သည် ကွဲလွဲနေပါက၊ အခြား SU အများအပြားမှ ထွက်ခွာကာ ပြန်လည်ပူးပေါင်းခြင်းဖြင့် ပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း NUS မှ အတည်ပြုထားသည်။ Cambridge နှင့် မသက်ဆိုင်ပါက၊ 2019 ခုနှစ်တွင် ဒုတိယအကြိမ် လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။
သင့်ဝှေးစေ့များတွင် အရသာခံနိုင်သော ကိရိယာများ ရှိပါသလား။
Richard Brooks သည် မနေ့ညက CUSU မှ ကြီးမှူးသော စကားရည်လုပွဲ၌ ကွဲလွဲမှုကို ဆန့်ကျင်ပြောဆိုခဲ့သည်။